Hafanàm-po nomerika · Mey, 2016 · Global Voices teny Malagasy
Hafanàm-po nomerika · Mey, 2016
Tantara mikasika ny Hafanàm-po nomerika tamin'ny Mey, 2016
Mpikatroka Mafana Fo Tsy Mpitondra Fivavahana Nokendrena Ary Novonoina Tany Bangladesh
Azia Atsimo18 Mey 2016
Mpianatra amin'ny taranja lalàna, 28 taona, novonoinà mpamono olona telo tany Dhaka, Bangladesh, ny 7 Aprily 2016. Toa ireo tsikerany amin'ny fivavahana mitàna ny nentin-drazana no tena nikendrena ilay tovolahy.
Ny Fomba Hifehezan'ireo Vazimba Teratany Indray Ny Fahitàn'ny Hafa Azy Ireo
Amerika Latina15 Mey 2016
Mba hamenoana ny banga amin'ny fisoloana tena ireo vahoaka vazimba teratany eny anaty fampahalalam-baovao, manana setriny iray ireo vondrom-piarahamonina ireo : famoronana ny fitaovam-pifandraisana azy ireo manokana.
Mpikatroka Tontolo Iainana Mampitandrina Fa Mampidi-doza Ny Hazom-pirenen'i Kolombia Ny Fitrandrahana
Amerika Latina14 Mey 2016
"Angamba ny fomba tokana hahitana ny voaniho savoka amin'ny hoavy dia amin'ny hajia na vola taratasy sisa."
Azia Atsimo11 Mey 2016
#JusticeforJisha (Ny rariny ho an'i Jisha): Manohitra Ny Fanolanana Sy Ny Famonoana Ilay Dalit Vehivavy i India
Azia Atsimo09 Mey 2016
"#JusticeForJisha Tadiavo ny meloka. Atsaharo ny toe-tsaina manome tsiny ny niharam-boina. Atsaharo ny famelomana ny kolontsaina fanolanana."
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana05 Mey 2016
Eoropa Afovoany & Atsinanana04 Mey 2016
‘Noterena Hisotro Ny Amaniko Aho’: Noafahana Taorian'ny 647 Andro Tany Am-ponja, Saingy Tsy Ho an'ny Rehetra Izany”
Afrika Mainty03 Mey 2016
Noafahan'ny Fitsarana Avo Federaly ao Etiopia madiodio ireo lehilahy roa efa tany am-ponja nandritra ny 600 andro mahery noho ny fiampangana azy ireo tamin'ny fampihorohoroana. Saingy tsy tsara vintana tahaka izany kosa ilay lehilahy fahatelo.